Ny Fiankohofana Amin’Olo-malaza Mpanao Politika Ao Trinite sy Tobago · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Jona 2014 13:55 GMT
Saina Trinite sy Tobago, natao tahaka ny firafitra “Grunge” (malotoloto, simbasimba) amin'ny taratasy miendrika efa taloha, navoaka teo ambanin'ny lisansa Creative Commons – Attribution 3.0 Unported.
Leo ny adihevitra politika ao Trinite sy Tobago, kapotsaka toy ny trondro ao anaty fotaka, ny mpitoraka bilaogy iray momba ny politika, naneho ny tsy hafaliany taminà lahatsoratra, mijery ny fomba nilalaovan'ny fampielezan-kevitra politika hatrizay ny firenena, ary nandroso hevitra izy fa tokony avy amin'ireo mpifidy ny fiovàna:
Tsy zava-baovao ho an'ny mpanao politika hatrizay, ary tsy zava-baovao ho antsika ihany koa , ireo zavatra ratsy foronina rehetra ary apetraka ho toy ny zavatra mahavariana eo amin'ny rindrin'ny vahoaka.
Tany ampiandohan'ny taona 1961, nampisy fifandirana ara-poko ny fizotran'ny fifidianana izay nitondra tamin'ny fihetsika nampiahiahy.
Nandritra ny fampielezan-kevitra, nipoaka ny herisetra ary tsy maintsy nanaovana filazana tany misahotaka voafetra mihitsy…
Ohatra iray fotsiny izany. Namoha ilay resaka “basy tsy tena izy nalaza be” tamin'ny taona 1981 iny koa ilay mpitoraka blaogy, izay nisian'ireo mpifaninana avy amin'ny antoko mpanohitra, ny Fikambanana ho ho an'ny Fanarenam-Pirenena, nody nanao fifampitifirana tsy tena izy, nanao tatitra diso tany amin'ny mpitandro ny filaminana, nanome tsiny ampahibemaso ireo ankolafy politika hafa, ary tsy voahelingelina velively tamin'ny zavatra nataony hatramizao.
Ny Eternal Pantomime dia nilaza ireo tranga vao haingana mikasika fitondrantena mitovitovy amin'izany, saingy namnpifantoka ny sainy tain'ilay fanambaràna tamin'ny herinandro lasa teo momba ny fampielezankevitra natao hamelezana ny lehiben'ny mpanohitra amin'izao fotoana izao ao amin'ny firenena, taorian'izay izy namelabelatra ny hitany fa tokony ho zava-dehibe amin'ny fifidianana manaraka – ny fahombiazana ara-politika:
Tokony hisy fifidianana amin'ny Septembra 2015 raha araka ny lalàm-panorenena. Tsy manana irika andresena amin'io mihitsy ny Governemanta UNC/PP [ny Kôngresy Nasionaly Mitambatra sy ny Olon'ny vovonana mpiara-dia aminy, izay misy ny governemanta ankehitriny], na dia eo aza ny laza mafy fototra an'i Kamla [Persad-Bissessar, ny praiminisitry ny firenena]. Maro loatra ireo fanafintohinana sy fihetsika diso tokony ialàna mandritra io fampielezan-kevitra amin'ny herintaona io.
Matetika efa fampielezan-kevitra ho an'ny antoko eo amin'ny fitondrana sahady ny zava-bitany teo aloha [anefa] tena ratsy laza loatra ito governemanta ito tamin'ilay lalànany. Tsy nisy faly tamin'ilay kabinetra feno mpisolovava mba hamolavola lalàna nefa tsy nahomby, nanomboka tamin'ilay Toko faha 34 ho an'ny Volavolan-dalàna miaramila, ka hatramin'ny volavolan-dalàna mikasika ny ADN (ny mombamomba zenetika) sy ny Alika Mampidi-doza.
Notsikerainy ny fikafika izay lazainy fa nampiasain'ny governemanta mba hifikirana eo amin'ny fahefana politika:
1. Mifanohana sy mifanjohy toy ny fiarandalamby ireo filoha mpitarika ary ireo fototry ny antoko kosa atao mikorontana toy ny any anaty ala, maneho hatezerana tsy mitombina eo anoloan'izay sahy mitsikera azy.
2. Apetraka ny fikorontanana ara-poko.
3. Atao lasibatra ary haratsiana ny filoha mpitarika.
Eo ankilan'izany, nino izy fa ny fampielezan-kevitra rehetra – na avy amin'ny antoko eo amin'ny fitondrana izany, na avy amin'ireo mpifaninana aminy – dia tokony hatao araky ny zavatra hita sy vita teo aloha:
Tokony tsy mihaino fotsiny ny tabataba isika mpifidy, fa mandinika sy mijery tsara ny zava-bitan'ny UNC/PP nandritra ny taona 2010 ka hatramin'ny fotoana hisian'ny fifidianana ; ary tokony hamakafaka ny zava-bitan'ny PNM ihany koa [ny Hetsika Nasionalin'ny Vahoaka, ny antoko mpanohitra] , indrindra fa ny fomba fiasan'i Rowley [ilay mpitarika politikany] ary ireo zavatra vitany sy traikefany.
Ampitahao ireo zavatra vitan'ireo lehibe-nà antoko roa isafidianantsika ireo : Keith sy Kamla.
Andao mba hatao araky ny zavatra vita ny tamin'ny taona 2015, fa tsy fampielezan-kevitra manaratsy ny olona malaza hafa fotsiny.
ny sary nampiasaina teto amin'ity lahatsoratra ity dia avy amin'i Nicholas Raymond, nampiasàna ny lisansa Attribution 2.0 Generic Creative Commons license. Tsidiho ny sary mifandimby ao amin'ny flickr an'i Nicholas Raymond.